IDundee July kwelinye izinga
UHLENGIWE Mavimbela ungqongqoshe woMnyango wezeMidlalo, ezokuNgcebeleka, Amasiko nobuCiko KwaZulu-Natal nozakwabo uNonhlanhla Khoza woMnyango wokuThuthukiswa koMphakathi noThami Mchunu umengameli weKZN Sport Confederation bemi nojokhi ngesikhathi kwethulwa izinhlelo zangonyaka ozayo zeDundee July Horce Racing Isithombe: SITHUNYELWE
Mcebo Mpungose | November 4, 2020
IZOKWENYUKELA kwelinye izinga iDundee July Horse Racing uma sekwakhiwe indawo enomzila okuqhudelana kuwo amahhashi.
UNgqongqoshe wezeMidlalo KwaZulu-Natal, uHlengiwe Mavimbela, uthe basemalungiselelweni okwakha iDundee Horse Racing Track elokishini iSibongile khona eDundee. Lokhu bakwenza ngokubambisana nezinkampani ezizimele.
Uthe nakuba engakabi nalo usuku oluqondile okuzokwakhiwa ngalo kodwa sekuqaliwe ukuboniswana ngohlobo lwesakhiwo.
Phakathi kwabazokwakha lapha yindawo okuhlala kuyo izibukeli, igumbi elizokuba nemicimbi ehlukene, umzila wamahhashi, nokufaka izibani zezinga eliphezulu.
Uthe inhloso wukubona umjaho ufinyelela ezingeni lomqhudelwano iVodacon Durban July osekuphele iminyaka bephupha ngako.
“Ngikhuluma nawe nje omunye wabaxhasi bethu iHollywoodbets isiqalile ukuhlola ukuthi indawo izokwakhiwa kanjani. Sifuna ibe sezingeni eliphezulu ifane nezifana neHollywoodbets Greyville Racecourse, eThekwini. Nakuba ngingeke ngiveze okuningi kodwa ngonyaka ozayo luzobe selukhona ushintsho,” kusho uMavimbela.
Udalule nokuthi kusukela kwiDundee July yangonyaka ozayo kuzoqalwa ukubhejelwa amahhashi. Njengamanje kukhona ithimba elimatasa elilekelelana nezinkampani ezinjengeHollywoodbets neGaming and Betting elihlanganisa iminingwane yamahhashi efana nokuthi likhuliswe kanjani, selike lanqoba miphi imijaho, lineminyaka emingaki nokunye. Lokhu kuzosiza amaphanta.
“Kusijabulisa kakhulu lokhu ngoba umdlalo kuwubeka kwelinye izinga. Ngaphandle kojokhi, namaphanta asezoba sethubeni lokuzenzela imali. Kumanje kunethimba elihlanganisa ulwazi ngamahhashi nojokhi abazogijima ngonyaka ozayo. Lokhu kuzosiza amaphanta ekukhetheni izimfivilithi.”
UMavimbela uveze nokuthi uhulumeni wesifundazwe usujube uMnyango Wezolimo ukuthi wenze isiqiniseko sokuthi ufundisa abanikazi bamahhashi ukuthi kusukela ebuncaneni akhuliswa kanjani kuze kube afika esigabeni sokutelebhela.
UMnyango Wezokuthuthukiswa koMnotho nezokuVakasha uzoqikelela ukuthi umdlalo uphendulwa kanjani ibhizinisi. Okunye okusha wukuthi kusukela kwiDundee July Horce Racing yangonyaka ozayo izivakashi ngeke zisalala emahhotela kodwa zizolala emizini eqokwe wumnyango. Ezinye izinkampani ezingabaxhasi iGaming and Betting nebhange Ithala.